पिरो खानु लाभ वा हानी जानिराखौं – Jagaran Nepal
पिरो खानु लाभ वा हानी जानिराखौं
बढी खुर्सानी खाइने देश:- हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा नै खानामा खुर्सानीको प्रयोग अति नै गरिन्छ । भारतबाहेक टर्कीमा एक दिनमा एक जना व्यक्तिले करिव ८६ दशमलव ५ ग्राम खुर्सानी खान्छन् । यसको अर्थ संसारभरमा सबैभन्दा धेरै खुर्सानी खाने देश टर्की हो ।
धेरै खुर्सानी खान किन मन लाग्छ ? :- रोमाञ्च खोज्ने चाहना तथा खुर्सानीको केमिकलको स्वादको बढ्दो चाहनाबीच अडकिएको एउटा जटिल कहानी छ । समयसँगै खुर्सानीमा क्याप्सासिन नामक एउटा केमिकल उत्पन्न भयो । जुन त्यसको पिरोपनाको कारण हो । तर, अझ पनि यसमा बिबाद रोकिएको छैन।
चराहरुले सजिलै खुर्सानी खान्छन् -खुर्सानीको बोटबिरुवाका चरा-चुरुङ्गीका लागि कसरी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको यूनिभर्सिटी अफ एरिजोनाले पत्ता लगाएको छ । स्तनधारी जनावरहरुको पाचन प्रक्रियामा खुर्सानीको विउ टुक्रिन्छ र त्यो पुनः अंकुरित हुँदैन । तर, पन्छिहरुसँग त्यस्तो हुँदैन । उनीहरु सबै बिऊ निल्छन् र मलमा पुरै बिऊ निकाल्छन् । त्यसबाट नयाँ बिरुवा उम्रन्छ ।
के खाद्य विषाक्तता बच्नका लागि खुर्सानी खाना सुरु गरिएको हो ?:- गर्मी हुने देशहरुमा प्रायः सबै मासुको परिकारमा केहीमा एउटा मात्र मसला हाल्छन् र धेरैमा विभिन्न किसिमको मसलाहरु हालिन्छ । त्यस्तो चिसो हुने देशहरुमा ब्यञ्जनहरुमा कम मसला हालिन्छ । खुर्सानी धेरै प्रयोग हुने देशहरुमा थाइलेन्ड, फिलिपिन्स, भारत र मलेसिया जस्ता देशहरुको नाम अगाडि आउँछ । त्यस्तै स्वीडेन, फिनल्यान्ड र नर्वे जस्ता देशहरुमा खुर्सानी सबैभन्दा कम प्रयोग गरिन्छ ।
स्वादका माध्यमहरु:- फूड एन्थ्रोपोलाजिस्टका ओरी कोनोरले यसको अर्को कारण बताउँछिन् । उनी भन्छिन्-‘जसरी आलु र उखुको बारेमा युरोपमा शताब्दीसम्म पनि थाहा थिएन । त्यसैगरी खुर्सानीको बारेमा पनि कसैलाई थाहा थिएन । तर, जब युरोपका मानिसहरु अमेरिका पुगे र व्यापारको बाटो खुल्यो । त्यसपछि खुर्सानी संसारभरी फैलियो ।’